Filankevitry ny minisitra: jerena akaiky ny fampivelarana ny nomerika - ewa.mg
News - Filankevitry ny minisitra: jerena akaiky ny fampivelarana ny nomerika
Nankatoavina nandritra ny
filankevitry ny minsitra, ny 9 jona teo, ny fiaraha-miasan’ny
minisiteran’ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny
fampiroboroboana ny haitao ara-kajy mirindra amin’ny “cabinet de
consultance Bearing Point”. Ezaka ataon’ny minisitera mikasika ny
fanavaozana sy fampandehanana indray ny «
Institut National des télécommunications et des postes
» lasa antsoina hoe « Institut national
de digitalisation » manomboka izao.
Efa nosafidin’ny Banky foiben’i
Madagasikara tamin’ny fifampiraharahana mikasika ny
« e- ariary » io kabinetra io. Asa miandry: ny
fametrahana ny « document cadre », ny paikady
hisian’ny « inclusion numérique » any amin’ny faritra sy ireo
drafitrasa hanaovana ny nomerika ho sehatra iray
hampiroboroboana ny firenena, ary fijerena famatsiam-bola
Ny amin’ny fambolena, ny fiompiana
ary ny jono, nankatoavin’ny Fida (1) ny famatsiam-bola andiany
faharoa, iray tapitrisa dolara mahery kely, ho fanatanterahana ny
tetikasa Pacpa II (2) any atsimon’i Madagasikara: Anosy, Atsimo
Andrefana. Antso nataon’ny fitondrana sy ny Firenena mikambana noho
ny kere. Ny famatsiam-bola voalohany 824 677 dolara,
nanohanana ireo mpamboly sy ny tanora any ambanivohitra eto
Fantatra ihany koa fa ao anatin’ny
fanomanana ny fandrafetana ny tetibolam-panjakana 2021,
asiam-panitsiana izao ny minisiteran’ny Toekarena sy ny
tetibola. Faritana momba ny vinavina mahakasika ny mety ho
fidiram-bola noho ny zava-mitranga ankehitriny, ny ho lany amin’ny
tetikasam-pampandrosoana ary ireo fandaniana eo
anivon’ireo minisitera sy ireo andrimpanjakana.
Fida (1) :
Pacapa II (2) : Projet d’appui à la
L’article Filankevitry ny minisitra: jerena akaiky ny fampivelarana ny nomerika a été récupéré chez Newsmada.
20 tapitrisa euros no hampiasain’ny fisc frantsay hijerena ny tambazotra sosialin’ireo mpandoa hetra
Ny fisc frantsay dia handany 20 tapitrisa euros ao anatin'ny rindrakajy (logiciel) hanadihady sy hanvaka ireo données izay avelan'ny mpandoa hetra ao amin'ny tambazotra sosialy. Ny tanjona dia mba ahafahana mijery ny fomba fiainan'ireo mpanao hosoka izay mipoitra eo amin'ny Facebook na Twitter ary mampitovy ny filazan-ketran'izy ireo. Hampitandremana izany ireo mpandoa hetra izay miseho eny amin'ireny tambazotra sosialy ireny mitondra Ferrari kanefa izy dia tsy an'asa. Ny antony ? Araka ny volazan'i Gerald Darmanin, ny fisc frantsay dia hijery amin'ny antsipirihany manomboka ny taona 2019 ny tambazotra sosialy miaraka amin'ireo rindrakajy (logiciels) matanjaka afaka manadihady sy manavaka données an'alavitrisany izay ao amin'ny Twitter, Facebook, Linkedin na Instagram. Cet investissement informatique massif de 20 millions d'euros, selon Le Parisien, s'appuie sur du logiciel utilisant des technologies de data mining ("fouille de données"). Ces traitements massifs et automatisés sont capables de compiler rapidement des milliards de données et d'en trier les résultats pour les présenter de manière exploitable. Grâce à ces algorithmes, le fisc prévoit d'identifier et de recouper les photos (celles sur les éléments du patrimoine), les éléments de géolocalisation (pour les expatriés fiscaux) ou informations sur le profil public affichées par les contribuables sur Internet. Io fandaniana informatika goavana io, araka ny voalazan'ny "Le Parisien" dia miankina amin'ny rindrakajy (logiciel) mampiasa ny teknolojia ana data mining (mikaroka données). Ireo kajikajy lehibe sy mandeha ho azy ireo dia afaka ny mikirakira farak'izay haingana données an'alavitrisany ary mamoaka ny vokatra izay tiana aseho ary azo vakian'ny be sy ny maro. Rehefa hampiasaina io rindrakajy (logiciel) io dia miheritreritra ny fisc ny hanavaka sy hampitambatra ny sary (ireo fanana izany), ny toerana izay misy azy (ho an'ny tsy any Frantsa izany) na ny mombamomba an'ilay olona azo jeren'ny olona rehetra izay mipoitra ao amin'ireny tambazotra sosialy ireny. Rindrakajy mba hanambarana an'ireo données azon'ny olona rehetra jerena Ny fanambin'ireo mpiasan'ny hetra frantsay dia ny hangalana ny mombamomba an'ilay mpandoa hetra (ny fomba fiainany sy ny manodidina azy), indrindra indrindra raha manana fiainana mivoitra izay eo amin'ireny tambazotra sosialy ireny, hoy ny tale jeneralin'ny "Finances publiques" izay mitantana ny fiscalité an'ny fanjakana. Hoy ny solontenan'ny Bercy tao amin'ny "Le Parisien" hoe : "Izay dia eo an-dalam-piresahana amin'ny CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés de la Listes) an'ireo singa izay azo jeren'ilay rindrakajy (logiciel)". Ireo singa ireo dia afaka ampitoviana amin'ny fombam-piainan'ilay mpandoa hetra tena izy amin'izay nolazainy tao amin'ny filazan-ketra. Rahoviana ny CNIL no hijery ny fitaovana informatikan'ny fisc Ho an'i Bercy, ny fampiasana fitaovana informatika ary fomba izay atokana ny fitadiavana hosoka dia tsy vaovao. Ny fitaovany izay ampiasainy dia efa betsaka tokoa. Herintaona lasa izay dia nisy didim-panjakana nivoaka tao amin'ny JO ny 14 novambra 2017 izay nanome alalana an'ireo mpiasan'ny fisc ny hampiasa ny fitaovana hiadiana amin'ny osoka antsoina hoe "ciblage de la fraude et valorisation des requêtes". Io rindrakajy (logiciel) io dia mampiasa kajikajy tena matanjaka ka mamantatra ny "probabilité de fraude" an'ireo mpandoa hetra amin'ny fanenjehanan ny tsy fitoviana ao amin'ny filazan-ketra. Manambatra ny fichiers ampolony ao amin'ny fisc sy any ivelany toy ny avy amin'ny andrimpanjakana hafa. Rehefa nanontaniana ny CNIL tamin'ny taona lasa dia nanaiky izy ireo mikasika an'io fijerevana ny tambazotra sosialy io saingy hoy izy hoe io fitaovana informatika io dia tokony hijanona "fitaovana hanampiana sy hitari-dalana ny mpiasan'ny fisc fa kosa tsy tokony ho fitaovana hanaovana vinavina (profilage) sy hamantatra hoe iza no mety hanao hosoka". Cet article a été tiré de BFMTV
Miha mahazo vahana ny kitrotro : Miisa 4 600 efa voany
Mbola mampiteny azy ny aretina kitrotro amin’izao fotoana izao. Tao anatin’ny andro vitsy dia nitombo isa indray ny olona voany. Raha 4 000 ireo voany ny alarobia teo dia efa tafakatra 4 600 izany ny zoma teo ka na olon-dehibe na zazakely tratrany avokoa. Na efa miparitaka manerana ny distrika 23 aza ny aretina dia mbola mitana laharana amin’ny olona voan’ny aretina ny eto amin’ny faritra Analamanga. Amin’ireo olona 4 600 ireo tokoa dia eto Antananarivo sy ny manodidina azy ny 3 900 amin’ireo. Marihina fa ireo olona namonjy toeram-pitsaboana ireto fantatra ireto ary voamarika ihany koa fa ireo olona tsy vita vaksiny tamin’ny mbola kely ny ankamaroany. Ny tsy fahavitana vaksiny tamin’ny mbola koa no antony maha maro isa ireo olona voa. Nambaran’ny mpitsabo tsy miankina iray fa tsy ampy hery fiarovana na koa diso reraka loatra na tsy ampy sakafo mihitsy aza no mahatonga ny fiverimberenan’ny aretina. Nomarihany ihany koa fa mahafaty na mampitondra takaitra mandrapahafaty ny tsy fitsaboana ny aretina kitrotro. Tsiahivina hatrany fa ny fanaviana, reraka, malain-komana, mena maso no fisehoan’ny aretina. Mikohaka, avy amin’ny ranon-delo sy ny rehoka kosa no fomba fifindrany. Tsara marihina koa fa ny fanaovana vaksiny ihany no hiadiana amin’ny aretina kitrotro, hoy ny ministera ary tsy maintsy atao vakisiny miaro amin’ny kitrotro ny zaza latasaka ny 5 taona. Laurena Nany L’article Miha mahazo vahana ny kitrotro : Miisa 4 600 efa voany est apparu en premier sur .L’article Miha mahazo vahana ny kitrotro : Miisa 4 600 efa voany a été récupéré chez Triatra.
Efa nihemotra mialoha tsy ho eny an-kianja ny RMDM: nofehezin’ny Emmo/Reg tanteraka ny teny Analakely sy teny Ambohijatovo
Tsy tanteraka indray koa ny hetsiky ny mpanohitra RMDM. Efa niatrana, vao maraina, tahaka ny mahazatra, ny Emmo/Reg marobe nirongo fitaovam-piadiana miaraka amin’ny fiara 4×4 sy ny kamiao. Rakotra azy ireo ny teny Ambohijatovo sy ny teny Analakely.« Tsy maintsy noraisina ny fepetra hitandroana ny filaminana sao mety misy korontana. Tsy henoko ny hoe tsy raikitra ny hetsika ary nihemotra ireo mpanohitra. Avelao ny olona hivezivezy ankalalahana », hoy ny Sekreteram-panjakana misahana ny Zandarimariam-pirenena (Seg), ny Jly Ravalomanana Richard. Nidina teny an-kianja ny tenany ary anisan’ny teny an-toerana koa ny minisitry ny Filaminana anatiny, Randrianarison. Nohamaivanina ny fivezivezena ka afaka nivarotra ireo mpivarotra. « Anisan’izany ny any amin’ny Pavillon any. Navela malalaka nivezivezy ny olona » hoy izy. Na izany aza, efa tamin’ny 1ora tolakandro vao novahana azo nandehanana ny teny amin’ny kianjan’ny 13 mey sy ny manoloana ny lapan’nyTanàna. Nialoha izany, voasakana avokoa ireo nanan-draharaha teny afovoan’Analakely.Efa nanambara mialoha ny RMDMNikatona ireo mpivarotra eny amin’ny Arcade. Tsy azo nandehanana teny amin’ny araben’ny Fahaleovantena fa tany Petite Vitesse kosa no nifamezivezy ny olona. Tahaka izany koa, afaka nivezivezy ny tany Ambodifilao.Etsy andaniny, efa nanambara mialoha ny harivan’ny zoma ny eo anivon’ny RMDM fa tsy ho eny Ambohijatovo indray izy ireo, rehefa nolavin’ny prefektiora ny fangatahan’izy ireo ho eny amin’ny kianjan’ny demokrasia. Na izany aza, takin’ny mpanohitra ny hanesorana ny tsangambaton’ny Pr Zafy Albert ao Ambohijatovo rehefa tsy avela hidirana hanehoana hevitra ao.Araka izany, andrasana indray ho ny valin’ny tenin’ny prefet de police ny amin’ny fampahafantana nataon’ny depiote Tim fa hanao tatitry ny fivorian’ny Antenimiera eny Soamandrakizay. Hotanterahina ny asabotsy 6 marsa izao izany.Synèse R.L’article Efa nihemotra mialoha tsy ho eny an-kianja ny RMDM: nofehezin’ny Emmo/Reg tanteraka ny teny Analakely sy teny Ambohijatovo a été récupéré chez Newsmada.